Kufamba kwenyika dzepasi rese kunodzosa danho rakakosha munzira kwayo
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » USA Kuputsa Nhau » Kufamba kwenyika dzepasi rese kunodzosa danho rakakosha munzira kwayo
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hurumende Nhau • Health News • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • nhau • vanhu • Kuvakazve • Resorts • Kutarisirwa • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • USA Kuputsa Nhau
Kufamba kwenyika dzepasi rese kunodzosa danho rakakosha munzira kwayo.
Mushure meanoda kusvika makore maviri ezvirambidzo, Muvhuro unotanga muchokwadi kudzoka kwekufamba kwenyika, apo mhuri dzakaparadzana kwenguva refu neshamwari dzinogona kubatana zvakachengeteka, vafambi vanogona kuongorora nyika iyi inoshamisa, uye US inokwanisa kubatana nenharaunda yepasirese.
Indasitiri yekufambisa yeUS ichagamuchira vashanyi vese vakabaiwa vadzoka kuUnited States mushure memwedzi gumi nepfumbamwe yezvirambidzo zvine chekuita nedenda kutanga Mbudzi 19.
Kuvhurazve 'danho rakakosha munzira kwayo,' kunyangwe zvimwe zviwanikwa zvemubatanidzwa zvichidikanwa kugadzirisa vhiza kugadzirisa kumashure.
Muna 2019, nzendo dzepasirese dzakapinda dzakaburitsa madhora mazana maviri nemakumi matatu nemapfumbamwe emadhora emari yekunze kunze kwehupfumi hweUS uye yakatsigira zvakananga mamirioni 239 emabasa ekuAmerica.
Pamhepo, pasi uye pazviteshi zvegungwa zvekupinda, uye munzvimbo dzese dzepasirese, indasitiri yekufambisa yeUS ichagamuchira vashanyi vese vekunze vakabaiwa vadzokere nyika dzakabatana mushure memwedzi gumi nepfumbamwe yezvirambidzo zvine chekuita nedenda kutanga Muvhuro (Mbudzi 19), chiitiko chakamirirwa kwenguva refu chinoratidza kuvakwazve kwekufamba kwepasirese.
Chiito ichi inhanho yekutanga yakakosha mukudzoreredza musika une mari yakawanda wekufamba kwenyika. Muna 2019, nzendo dzepasirese dzakapinda dzakaburitsa madhora mazana maviri nemakumi matatu nemapfumbamwe emadhora emari yekunze kunze kwehupfumi hweUS uye yakatsigira zvakananga mamirioni 239 emabasa ekuAmerica.
Mushure meanoda kusvika makore maviri ezvirambidzo, Muvhuro unotanga muchokwadi kudzoka kwekufamba kwenyika, apo mhuri dzakaparadzana kwenguva refu neshamwari dzinogona kubatana zvakachengeteka, vafambi vanogona kuongorora nyika ino inoshamisa, uye US inokwanisa kubatana zvakare nenharaunda yenyika. Izuva rakakosha kune vafambi, kunharaunda nemabhizinesi anovimba nekushanya kwenyika, uye nehupfumi hweUS zvakazara.
Nyika dzakakanganiswa nekufamba kwakaganhurirwa - dzaisanganisira United Kingdom, Ireland, nyika makumi maviri nenhanhatu dzeSchengen Area, South Africa, Iran, Brazil, India neChina - dzaingova 26% yenyika dzese pasirese asi dzakaverengera 17% yemhiri kwemakungwa. vashanyi kuUnited States muna 53.
Miganho yepasi neCanada neMexico - misika miviri yepamusoro inopinda kuUS - yakavharwawo.
Nepo kuvhurazve miganhu yedu idanho rakakosha munzira kwayo, basa rakawanda rinosara rekuona kupora kwepasirese. Iwe unofanirwa kuenderera mberi uchinzvenga nzendo dzisina kukosha kuenda kunzvimbo dzese. Pasinei nemamiriro ako ekudzivirira: gara uchiziva nezve COVID-19 chiitiko.